How To Block All Porn Websites On Your Computer Without Using Any Software ~ ITmanHOME
How To Block All Porn Websites On Your Computer Without Using Any Software
မိမိစက်ရဲ့ connection မှာ Porn Site တွေကို ပိတ်ထားချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များ ဆော့ဝဲအသုံးမပြုဘဲနဲ့ပိတ်တဲ့နည်းလမ်း
ပါ။ porn site ဆိုတာဘာလဲလို့မသိသေးရင် မကောင်းတဲ့အပြာဆိုက်တွေလို့မှတ်လိုက်ပါ။ အဲဒါလေးတော့မပိတ်ပါ
ရစေနဲ့လို့ပြောနေဦးမယ်နော်။ ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးတွေ မကြည့်စေချင်ရင် ပိတ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးသာဖြစ်ပါ
တယ်။ ဆရာကြီးတွေအတွက်မဟုတ်ကြောင်းပါဗျာ။ ဆရာတွေကတော့ ဒီလိုပိတ်ရင် ဒီလိုပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာ သိ
၁။ Control Panel ကိုသွားပြီး Network and Sharing Center ကိုနှိပ်ပါ။
၂။ ပြီးတော့ Local Area Connection ကိုနှိပ်ပါ။
၃။ Properties ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
၄။ Internet Protocol Version4(TCP/IPv4) ကိုနှိပ်ပြီး Properties ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
၅။ Use The Following DNS Server Address ရဲ့အ၀ိုင်းလေးကို အမှန်ခြစ်ပြီး Preffered DNS Server နဲ့
Alternate DNS Server ရဲ့ Address တွေကို 208. 67. 222. 123 ၊ 208. 67. 220. 123 နဲ့ချိန်းလိုက်ပါ။
ဘရောက်စ်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါ။ porn site တွေကိုဖွင့်ကြည့် တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်ပါ။
Ref : http://www.mytrickstime.com/2012/03/how-to-block-all-porn-sites-without-any.html